ADY AMIN’NY KOLIKOLY EO AMIN’NY SEHATRY NY FANABEAZANA- Tafatsangana ireo komity rehetra - Ministère de l'Education Nationale
ADY AMIN’NY KOLIKOLY EO AMIN’NY SEHATRY NY FANABEAZANA- Tafatsangana ireo komity rehetra
Tetsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina no notanterahana ny hetsika antsoina hoe: « tambajotra mandala ny fahamarinana sy ny fahitsiana », izay notontosaina androany maraina. Ny Bianco sy ny fari-piadidiam-pampianarana eto Antananarivo Renivohitra no niara nisalahy tamin’izany. Nisy ny hetsika fifaninanana ara-panatanjahantena, dihy mirindra, tononkalo nataon’ireo mpianatra eny anivon’ireo sekoly amin’ny ambaratonga samihafa nanaovana ny fanentanana amin’ny ady amin’ny kolikoly. Nanokatra ny hetsika tamin’ny fomba ofisialy teny an-toerana ny solontenan’ny minisitry ny fanabeazam-pirenena tamin’ny alalan’ny Tale jeneraly Dr AndriamampandryTodisoa. Nambarany tamin’izany fa efa tafantsangana ny komity miady amin’ny kolikoly ka 31 isaky ny Cisco, 17 isaky ny Faritra. Aza matahotra hoy izy fa ny fanadinana dia ho vita daholo, Zero kolikoly izany hoy izy. Ezahina ary ho hamafisana ao anatin’ny fandaharam-pianarana ny ady amin’ny kolikoly. Marihina fa andiany faha efatra ity hetsika ity.